नेपाल बैक नेपाली जनताको पुजीबाट नै सञ्चालन गरिएको बैंक हो – रोल्पा समाचार
२०७६ जेष्ठ १९, आईतवार ०२:३९ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७६ जेष्ठ १९, आईतवार ०२:३९ गते
शाखा प्रवन्धक नेपाल बैक रोल्पा शाखा
नेपाल बैंक लिमिटेड लिबाङ रोल्पा शाखा रोल्पा जिल्लामा स्थापना भएको बंैक हो । बैंकबाट व्यवसायीक कर्जा, सुन कर्जा लगायतका विभिन्न कर्जाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकबाट लक्षित वर्गसम्म सूचना प्रवाह, कर्जाको अवस्था, उद्वेश्य अनुसार कर्जाबाट व्यवसायी सञ्चालन भएको वा नभएको, सहुलियतपूर्ण कर्जाको अवस्था, बैंकको आगामी योजना लगायतका विषयवस्तुमा शाखा प्रबन्धक कुश अधिकारीसँग रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाका कार्यकारी सम्पादक रेशम बि.क.ले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
– पत्रिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ ।
धन्यवाद, नेपाल बंैक लिमिटेड समग्र बंैकिङ प्रणाली तथा वित्तिय अवस्था बारे नेपाल बंैक लिमिटेड, रोल्पा शाखाको तथा मेरो विचार राख्ने दिनुभएकोमा रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकालाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
– बैंकिङ अवस्थालाई कसरी निन्याल्नु भएको छ ?
बैंकिङ प्रणली आफै एउटा चुनौतिपूर्ण व्यवसाय हो । अरु व्यवसाय र बैंकिङ व्यवस्थापन अलि फरक छ । अरु व्यवसायमा मालिकको पैसाले व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको हुन्छ भने बैंकिङ सर्वसाधारणको विश्वासको आधारमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन हुन्छ । विश्वास जित्न आफैमा चुनौतिपूर्ण कार्य हो । अर्थतन्त्रमा बढि भएको रकम निक्षेपा मार्फत संकलन गर्न तथा आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा कर्जा मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने एक मध्यस्थाको भूमिका बैंकिङले निभाइरहेको हुन्छन् । नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालमा सर्व प्रथम वि.स. १९९४ सालमा स्थापना भएको पब्लिक लिमिटेड बैंक हो । शुरुमा केन्द्रीय बैंकले निभाउनुपर्ने भूमिका समेत नेपाल बैंकले निर्वाह गर्दै आएको इतिहास छ । हाल नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै बंैक अगाडि बढिरहेको छ ।
–बैंकले कुन–कुन सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ?
बैंकले खास सेवा भनेको निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । सो बाहेक सेवा देश विदेशबाट रकम पठाउने तथा भूक्तानी दिने विप्रेष्ठ सेवा (रेमिटान्स) घरमा बसी–बसी आफ्नो मोबाइलबाट रकम भुक्तानी गर्न सक्ने मोबाइल बैंकिङ, आस्वा, एविविस सेवा तथा निकट भविष्यमा एटिम सेवा दिने लगायतका आधुनिक बंैकले दिने सम्पूर्ण सेवाहरु नेपाल बंैक लिमिटेड, रोल्पा शाखाले दिइरहेको छ ।
–जिल्ला शाखा रोल्पाको लगानी तथा निक्षेपको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बंैक भएकोले रोल्पा जिल्लामा समेत आजभन्दा ४५ वर्ष अगाडि रोल्पा शाखा स्थापना भएको हो । जिल्लाका सरकारी कारोवार गर्ने भएकाले तथा रोल्पाली जनताको विश्वासको केन्द्र बनेको यस नेपाल बैंक लिमिटेड रोल्पा शाखामा करिव ८० करोड निक्षेप रहेको छ भने व्यवसाय कर्जा करिव १६ करोड रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा यस शाखाबाट करिव तीन करोड कर्जा प्रवाह भएको छ ।
–शाखाले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ ?
कर्जा लगानी आफैमा एउटा चुनौतिपूर्ण विषय हो । यस शाखामा दैनिक जसो कर्जा माग गर्ने सेवाग्राहीहरु आउने भएकोले बंैकले व्यवसायीक कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, सुन धितो राखी प्रवाह गर्ने सुनचाँदी कर्जा तथा कृषि कर्जा लगानी गर्दै आएको छ ।
– कति जना सेवाग्राहीहरुलाई शाखाबाटकृषि कर्जा उपलब्ध गराएको छ ?
यस शाखाबाट करिव ४० जना कृषकलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराइसकेको छ । खास गरेर कृषकलाई कृषि व्यवसायीको लागि कृषि कर्जाको आवश्यकता हो तर परम्परागत कृषि प्रणालीलाई देखाएर कृषि कर्जा मात्र गर्ने प्रचलन बढि छ । कृषिकले कृषिलाई पेशा व्यबनाउँछु भने फर्म दर्ता गरेर व्यवसायिक रुपमा कोही कृषकले कृषि कर्जा माग गर्न आएमा नेपाल बंैक लिमिटेड रोल्पा शाखाले उच्च प्राथमिकता दिएर कृषि कर्जा लागनी गर्ने जानकारी पनि गराउँछु ।
– कृषि कर्जा लगानीमा के–कस्ता समस्या देख्नुभएको छ ?
निर्वाहमुखि कृषि प्रणालीलाई बैंकले लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ । व्यवसायिक कृषिमा लगानी गर्न बैंक तयार छ तर कृषक आफै पनि खुलेर व्यवसायिक कृषि पेशा गर्न नसक्नु, लगानी गर्दा सम्बन्धित स्थानीयतह नगरपालिका, गाउँपालिकाको कृषि कार्य गर्नका लागि लागत स्टिमेट आवश्यक पर्ने र सो लगत स्मिेट बजार मूल्यभन्दा थोरै भएर आउँदा चाहिने जती लगानी हुन नसक्ने, केही हदसम्म कृषकको कृषि उपजको विमा सम्बन्धि समस्या, राज्यले कृषकलाई प्राथमिकता दिँदा दिँदै पनि कृषि पेशा आझै पनि व्यवसायिक बन्न नसक्नु नै कृषि कर्जा लगानीका समस्या हुन् ।
– सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी तथा यसका समस्या पनि बताइदिनुहोस्, न ?
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ को वजेट भाषणमा कृषक, महिला, दलित, विदेशबाट फर्किएका तथा शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रमा योग्दान दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । सोही बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तथा हाम्रो नेपाल बैंक लिमिटेडबाट सो बमोजिमको निर्देशिकाहरु जारी भई यस्ता सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु लगानी हँुदै आएका छ । हाम्रो यस रोल्पा शाखाबाट समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भएको र केही लगानी हुने प्रक्रियामा छन् । तर मेरो यो परियोजना हो, यसमा यति लाग्ने पूँजी यति हो, मेरो लागनीको मात्र यति हो बैंकले यति पूँजी लगानी गरिदिओस् भनेर परियोजना सहित कर्जा माग गर्न आउने सेवाग्राही ज्यादै कम देख्छु । बैंकले वा भन्नौ सरकारले सहुलियत कर्जा दिएको छ । सो सुहलियत कर्जा मिलाइदिनु प¥यो भनेर माग गर्ने चलन बढि छ । अर्थात परियोजना सहित कर्जा माग गर्नभन्दा कर्जा लिहाल्ने अनि के व्यवसाय गर्ने भन्ने ठोस योजना नभएका सेवाग्राहीहरु धेरै हुनुहुन्छ । यस्तो स्थितिमा कर्जा लगानी गर्न गह्रो हुन्छ ।
– कर्जाको निम्ति सेवाग्राहीहरुले कुन–कुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ ?
– सामान्यतया बैंकले व्यवसाय र व्यक्तिलाई गरेर दुई किसिमबाट कर्जा प्रवाह गर्दछ । व्यवसाय र व्यक्ति दुबैलाई गरेर धितासँग सम्बन्धित कागजात जस्तै चार किल्ला, पोत बुझाएको रसिद, लालपूर्जाको फोटोकपी, राजीनामाको कागज, टे«स ब्यू प्रिन्ट चाहिन्छ । व्यवसायिक कर्जाका लागि फर्म दर्ता, प्यान नम्बर, कर चुक्ता, वित्तिय विवरण, स्टक विवरण, खरिद बिक्रि विवरण आदि आवश्यकता पर्दछ भने व्यक्तिका लागि तलब भत्ता प्रमाणित कागजात वा आम्दानी प्रमाणित गर्ने कागजात, बैंक स्टिमेट, र नियुक्ति पत्र चाहिन्छ । अन्य कागजात अंशियार प्रमाणित कागज (पारिवारिक विवरण), नागरिकताको फोटोकपी, फोटो आवश्यकता पर्दछ भने कृषि कर्जाका लागि सम्बन्धित कार्यालयबाट सो कृषि परियोजनाको लागत स्टिमेट समेत आवश्यकता पर्दछ । यसरी सम्पूर्ण कागजात पूरा भएपछि मात्र बैंकले कर्जा लगानी गर्दछ ।
– बैंकबाट कर्जाको अनुगमन कसरी हुँदै आएको छ ?
जनताले विश्वास गरी निक्षेप बैंकमाजम्मा गरेको हुन्छ र मागको बखत बैंकले सो निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्दछ । त्यस्तो निक्षेपलाई विभिन्न शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको हुन्छ । ऋणीले बैंकबाट लिएको कर्जा के–का लागि लिएको हो । सोही परियोजनामा लगानी गर्नु पर्दछ । यस शाखाबाट पनि बेला बेलाममा आफूले प्रवाह गरेको कर्जाको अनुगमन गरिरहेको हुन्छ ।
–बंैकले परियोजनामुखिभन्दा धितोमुखी कर्जा धेरै लगानी गर्दै आएको छ, किन ?
निश्चित रुपमा अझै पनि नेपाल बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह प्रकृति हेर्दा परियोजनामुखिभन्दा धितामुखि कर्जा लगानी प्रकृति रहेको छ । सेवाग्राहीहरुले मेरो यति लाखको सम्पत्ति छ, बैंकले कति लगानी गर्न सक्छ भन्ने धेरै सेवाग्राहीहरु म देख्छ, म न कि मेरो यस्तो परियोजना छ, यसमा बैंकले कतिसम्म लगानी गर्न सक्ला ? भन्ने सेवाग्राही । धितो सुरक्षित भन्ने कुरा ऋणीले कर्जा लिएपछि कर्जा चुक्ता गर्न नसकेमा कर्जा असुलीका लागि लिएको हो । पहिलो कुरा त ऋणीको परियोना नै हो । परियोजना राम्रो भएमा कर्जा लगानी गर्दा जोखिम कम हुन्छ किन कि धितो आफैले नगद सिर्जना गर्न सक्दैन तर पनि अन्तिममा कर्जा प्रवाह गर्दा कतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा धितोको सुरक्षितको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
– यस शाखाको आगामी योजना बताइदिनुहोस् ?
नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको सबैभन्दा पुरानो अर्ध सरकारी बैंक हो । रोल्पा जिल्लामा पनि यो बैंक अन्य नीजि बैंकभन्दा धेरै अगाडि स्थापना भएको हो । रोल्पाली जनताले धेरै विश्वास गरी आफ्नो निक्षेपजम्मा गर्ने बंैक हो । अब नेपाल बैंक लिमिटेड रोल्पा शाखाले रोल्पाली जनताहरुलाई विश्वास गरेर लगानी गर्ने समय आएको छ । पुरानो बैंक, सरकारी बैंक, काम गर्ने तरिका फरक, ढिला सुष्टि, भन्ने अब छैन । नीजि क्षेत्रभन्दा अगाडि रहेर हाम्रो बैंक सेवा दिइरहेको छ । प्रविधि, जनशक्ति, व्याजदरदेखि लिएर अफिसको ले आउटसम्म सबैमा हामी अगाडि बढ्दै छौं । निकट भविष्यमा एटिम सेवा दिन गइरहेका छौं । यस शाखाको अब खास कार्य योजना भनेको रोल्पाली जनताको मन जित्दै निक्षेप संकलन गर्ने र कृषि, व्यपारमा कर्जा लगानी बढाउँदै जाने हो ।
– अन्तिममा केही छ, कि ?
नेपाल बैंक लिमिटेड पुरानो, देशभरि शाखा रहेको सरकारी बैंक हो । रोल्पा जिल्लामा घर्तिगाउँ, लुङ्ग्री शाखाबाट समेत बैंकिङ सेवा दिइरहेका छन् । नेपालको आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण र व्यवसायिकरण हुन जरुरी छ । जसमा बैंकहरुल्े समेत कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जानु पर्दछ । इतिहास बोकेको अत्याधुनिक बैंक नेपाल बंैक लिमिटेडमा बैंकिङ करोवार गरी ढुक्क बन्न म यस लोकप्रिया पत्रिका मार्फत सम्पूर्ण रोल्पा जिल्लाबासीहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७७ बैशाख १, सोमबार १६:२९ गते २०७७ बैशाख १, सोमबार १६:३७ गते
मानसिंह विश्वकर्मा बैशाख १ सुलिचौर हरेक मानिसहरुलाई लक डाउनमा समय विताउन, दिन कटाउन निकै कठिन परिरहेको बेलामा रोल्पा सुलिचौर रुइनीबाङका पृथ्वी...